Ongororo: Muna 2012 ini ndichatenga ... | Kubva kuLinux
Ongororo: Muna 2012 ini ndichatenga ...
Heino mhedzisiro yeiyo kuongorora kwakapfuura: «Iyo yakanakisa distro 2011 ndeye ...«, Nemhedzisiro iri pachena, iyo zvakare yakaisa Ubuntu seyakahwina mukundi.
Iyo itsva poll yemwedzi ine musoro wakasiyana zvakanyanya. Nevakawanda emahara software mapurojekiti kuwana nzvimbo dzakawanda uye dzakawanda (uye misika), mubvunzo unosara:mariri urikuenda shandisa mari yako shoma?
1 Mhedzisiro yeongororo yapfuura: yakanakisa distro 2011 iri ...
2 Ongororo: Muna 2012 ini ndichatenga ...
Mhedzisiro yeongororo yapfuura: yakanakisa distro 2011 iri ...
Ubuntu: 669 mavhoti (38.99%)
Linux Mint: 356 mavhoti (20.75%)
Debian: 203 mavhoti (11.83%)
Arch Linux: 141 mavhoti (8.22%)
Fedora: 135 mavhoti (7.87%)
Zvimwe: 53 mavhoti (3.09%)
VhuraSUSE: 53 mavhoti (3.09%)
Chakra: 25 mavhoti (1.46%)
Lubuntu: 19 mavhoti (1.11%)
Mandriva: 18 mavhoti (1.05%)
CentOS: mavhoti gumi nemana (14%)
Sabayon: mavhoti gumi (10%)
PCLinuxOS: 9 mavhoti (0.52%)
Puppy Linux: 7 mavhoti (0.41%)
Mageia: 4 mavhoti (0.23%)
Ehe, hongu ... Ubuntu ndiyo yakanyanya kunaka. Rarama kwenguva refu Ubuntu! : S
Neruoko rumwe chete pamoyo wangu, ndinokusiira chidimbu chezano: usagadzirire Ubuntu, edza mamwe ma distros.
Ndinokutendai kune 1700+ vavhoti!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Ongororo: Muna 2012 ini ndichatenga ...
Ulises Carbajal Alday akadaro
Ini ndatova netafura uye nharembozha yeApple, ndakavhotera Ubuntu TV, asi ndaizotenga Google TV.
Pindura kuna Ulises Carbajal Alday
Lipe Gutierrez Cotapos akadaro
Ndakaedza kushandisa Debian, OpenSuse naFedora, uye ndinogara ndichiguma ndodzokera kuUbuntu, ndiyo chete iyo zvinhu zvese zvinoshanda sezvazvinofanira, nevamwe ini ndinogara ndine matambudziko nechimwe chinhu chakasiyana.
Pindura Lïpe Gutiérrez Cotapos
Carlos Matteo akadaro
Arch Linux yakanyanya kushandiswa kupfuura Fedora uye OpenSUSE? Izvo hazvishamise kuti padiki padiki pane iyo inoshandisa vazhinji ^ ^
Pindura kuna Carlos Mateu
Ichokwadi ... ndanga ndisina kuona ... mmm ... inonakidza kwazvo!
Kutenda nekutarisa kwako!
Zvakanaka, izvo zvandisingafungi zvingave komputa nyowani
Ndiri kuenda kunotenga Guy Fawkes mask
«Yakawanda yakashandiswa» .. mumamiriro mashoma kwazvo evagari vakapindura ongororo. Chidimbu-chechinyorwa, mune inoenderana neiyi blog, ino ingori chikamu che "linux world".
Hongu Pablo, iri kunyanya padivi penguva uye kuti izvi hazvina kugadzikana sei. Ndiine Mint, Ubuntu kana Fedora ndinogona kushandisa iyo printer kunyangwe iine mhenyu CD, ine Chakra ini handigone.
Ini handisi kuzosiya paArch, ndezvechokwadi, kana ndikawana nguva yekubva paWindows kuenda kuGNU / Linux, ini ndichawanawo nguva yekusiya Arch pane yangu pc uye sezvinei kuti ndidzidze kana kuti ndinzwisise zvinhu zvakawanda. izvo zvakadaro handisi kuzvinzwisisa.
Tichava ipapo kuyedza kukupa ruoko.
Tarisa .. Ini ndinofunga zvese zvinoenderana:
1) yenguva yauinayo (arch inoda imwe nguva yekugadzirisa ... izvi hazvifungidzirwe sekushomeka asi zvinopesana). 2) zvinyorwa / maforamu / nharaunda dzinowanikwa kugadzirisa matambudziko ako (mune arch yakawanda)
3) hunyanzvi (ini ndinoona kuti hunyanzvi hushoma hunofanira kuve nahwo)
Anodiwa Pablo, ndeyekuti parizvino Ubuntu neMint zvinoita mutsauko wakanyanya kune mamwe ma distros, kupfuura chero chinhu mune mashandisiro avari kushandisa, ndinofunga ndiri mushandisi wemberi kana zvirinani kuti handisisiri novice, asi Semuenzaniso, ndakaisa Arch, uye inondipa kurwa kwakawanda zvekuti ndinoisiya zvakare.
Hondo yekuvharwa kweMegaupload yakatanga
Tiri kuuya kuRelics yaAnnorath, inonakidza yemuno MMORPG yeLinux.